သင်၏နောက်အွန်လိုင်းကွန်ဖရင့်ကဘယ်တော့လဲ။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 26, 2010 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 5, 2014 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်လုပ်ကိုင်နေသောအချို့ကုမ္ပဏီများ၊ အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးမှစီးပွားရေးသို့ (B2B) သည်မယုံနိုင်လောက်သောရလဒ်များကိုမြင်တွေ့ရပြီး၊ virtual ဖြစ်ရပ်များနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော်ဟာ virtual event marketing အကြောင်းအချိန်အတော်အတန်တင်ချင်နေပြီးမကြာသေးခင်ကစကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ် မကျေနပ်၊ ထိပ်တန်း virtual ဖြစ်ရပ်၊ virtual tradeshow နှင့်အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေးသူအွန်လိုင်း။
Unisfair သည် ၀ န်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်စုစုပေါင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုပေးသည်။ တက်ရောက်သူများကိုခြေရာခံရန်ခက်ခဲသောရိုးရာကွန်ဖရင့်နှင့်မတူဘဲ၊ virtual ကွန်ဖရင့်သည်သင့်အားအရာရာကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်! ခဲလျှော့ချမှုနှုန်းကုန်ကျစရိတ်အပြင်များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုရှိရန်အတွက် virtual conferencing များကိုကျင့်သုံးနေကြသည်။
ဒီနှစ်အစောပိုင်းကစစ်တမ်းတစ်ခုမှာ မကျေနပ်မှုကစျေးကွက်သမား ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်တိုးတက်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် လာမည့်နှစ်တွင် virtual ဖြစ်ရပ်များကိုသူတို့အသုံးပြုခြင်း။ virtual ဖြစ်ရပ်များကိုအတည်ပြုဘို့လူကြိုက်အများဆုံးအကြောင်းပြချက်ရန်ဖြစ်ပါသည် တိုးချဲ့ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (32 ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ခဲအသံအတိုးအကျယ်တိုးမြှင့် (15 ရာခိုင်နှုန်း) ။
အမေရိကန်စီးပွားရေးမီဒီယာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်းဝက် (ဘ်) အခြေပြုအဖြစ်အပျက် (၃) ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်မကကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Marketing Sherpa မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း virtual အစည်းအဝေးများသည်သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ၃၇% တိုးလာကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ခရီးသွားလာရေးဘတ်ဂျက်ပိုမိုတင်းကျပ်လာခြင်း၊ လူမှုရေးကွန်ယက်ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်သစ်ကိရိယာများကိုရှာဖွေခြင်းတို့သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။
Ariba သည်မကျေနပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ။ Ariba သည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးသည်သူတို့၏နောက်လာမည့်ကွန်ဖရင့်သို့ခရီးသွားခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ Unisfair ၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ သူတို့သည်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ကိုအွန်လိုင်းတွင်ပြောင်း။ အကျိုးများစွာရရှိခဲ့သဖြင့်မှတ်ပုံတင်သူ ၂,၉၀၀၊ တက်ရောက်သူ ၁,၆၁၈၊ ဒေါင်းလုပ် ၄,၀၀၀၊ တဲသို့လည်ပတ်မှု ၅,၂၀၀၊ ဒါကောင်းတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပါပဲ။
Virtual Event Marketing အတွက်သိကောင်းစရာများ
Unisfair အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Joerg Rathenberg မှ virtual event marketing အတွက်အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
အဖြစ်အပျက်မတိုင်မှီ: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညီလာခံတစ်ခုသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအတွက်သင်လိုပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ သင့်တွင်ကောင်းမွန်သောပရိသတ်မျိုးဆက်သစ်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းသေချာစေပါ။ ဖန်တီးမှုရှိရန်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုတတ်နိုင်သမျှဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်အဖြစ်အပျက်အတွက်သင်အားသွင်းပါကကွန်ဖရင့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူဖြစ်ရပ်များအထုပ်များ၊ ဥပမာ - တီရှပ်များကိုမှတ်ပုံတင်သူထံသို့ပေးပို့ပါ။ မှတ်ပုံတင်သူများအနေဖြင့်ဖိတ်ကြားချက်အား၎င်းတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်မျှဝေခွင့်ပြုသည့်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များအတွက်ချိတ်ဆက်မှုများပြုလုပ်ပါ။ လူအစုအဝေးကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောစပီကာများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းပါ။ ကောင်းသောအကြောင်းအရာသည်အောင်မြင်သော virtual event တစ်ခု၏သော့ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းသူများသည်သူတို့၏ Outlook ပြက္ခဒိန်များ၌စတင်ချိန်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
ဖြစ်ရပ်အတွင်း: သင်၏သင်ခန်းစာများကိုအပိုင်းအစငယ်များဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲပါ - virtual events များ၌လူတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ရောက်သူများကဲ့သို့အာရုံစူးစိုက်မှုသက်တမ်းမရှိပါ။ ၂၀ မိနစ်သည်အကောင်းဆုံးအရှည်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သင်၏စပီကာများကိုကွန်ယက်ခန်းမရှိချတ်များအတွက်ရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ။ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်၊ ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးပါ။ buzz ကိုဖန်တီးရန်နှင့်သင်၏အဖြစ်အပျက်၏အပူချိန်ကိုရယူရန်စစ်တမ်းများနှင့်လူမှုမီဒီယာများကိုပေါင်းစပ်ပါ။ အချိန်နှင့်တပြေးညီအစီရင်ခံစာများကသင့်အားဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာပြောပြလိမ့်မည်။ လူတွေကိုလှုပ်ရှားမှုရှိရာနေရာကိုပို့ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုသုံးပါ။ တက်ရောက်သူများအတွက်ပြိုင်ပွဲများသို့မဟုတ်ပန်းချီကားများကဲ့သို့ဆွဲဆောင်ရန်မက်လုံးပေးပါ။
ဖြစ်ရပ်ပြီးနောက် Virtual ဖြစ်ရပ်များသည်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်း virtual engagement platform များသို့လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ Q&A အပါအ ၀ င်သင်၏အကြောင်းအရာအားလုံးသည်တိုက်ရိုက်အပိုင်းပြီးဆုံးသည်နှင့်ချက်ချင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသင့်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်သူ ၅၀% ခန့်သည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကြသည်။ အခြား 50% ကိုလည်းသင်တက်ရောက်ရန်သေချာစေပါ။ သင်၏စိတ်ဓာတ်ရေးရာ၊ လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ပရိသတ်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်နှင့်နောက်ဆက်တွဲအတွက်သင့်အဖွဲ့အားထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Unisfair ၏ထိတွေ့မှုအညွှန်းကိန်းကဲ့သို့သောသြဇာပေးသောကိရိယာများ။ Virtual ဖြစ်ရပ်များသည်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိစဉ်တက်ရောက်သူတစ် ဦး လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကိုသင်သိရှိရလိမ့်မည်။ ဤကြွယ်ဝသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏အရောင်းအဖွဲ့သို့၎င်းတို့အားစကားစမြည်ဆက်ပြောနိုင်ရန်သေချာစေပါ။
စျေးကွက်ရှိအခြားကစားသမားများလည်း InXpo, ON24, Expos2, ဒုတိယနေရာ နှင့် 6Connex။ ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုအရှုံးမပေးရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသေးပါ။ အခြားတက်ရောက်သူများနှင့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ရာတွင်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။ ညီလာခံကုန်ကျစရိတ်ကိုဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့်စတင်နိုင်သဖြင့် virtual conference သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ခရီးသွားစရိတ်နဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ့်အလားအလာကောင်းတဲ့လူများစွာကိုသင်ဆွဲဆောင်တော့မှာပါ။
အခမဲ့ Analytics အတွက်သင်မည်မျှပေးဆောင်နေသနည်း။
WordPress ကို Hacked? သင့် Blog ကိုပြင်ဆင်ရန်အဆင့် ၁၀ ဆင့်